Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaaladda Kismaayo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaaladda Kismaayo
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaaladda Kismaayo
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah,kaas oo xalah ka dhacay Suuq ku yaalla bartamaha Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegee in qaraxa uu ahaa Bam gacmeed lagu weeraray Suuqa Golole oo ku dhow Aargada Magaalada Kismaayo,isla markaana uu ku geeriyooday hal ruux 11 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dadka khasaaraha kasoo gaaray qaraxaas ayaa waxaa ay isugu jiraan qaar kamid ah Ganacsatada iyo dad Suuqaasi ka adeegnayay,waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxaasi la geeyay isbitaalka Magaalada Kismaayo si loogu daweeyo.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan Kismaayo saakay ka heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Booliska iyo Nabadsugida Jubbaland ay howlgal ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo,kaas oo ay ku baadi goobayaan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi bambaano.
Majirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas’uuliyada qaraxaasi bambaano,iyad aoo sidoo kale Maamulka Magaalada Kismaayo iyo Taliska Booliiska aysan faah faahin ka bixin
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaaladda Kismaayo was last modified: June 10th, 2020 by Admin
Habeenkii 16 aad ee tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo Idaacada Warsan ka Socda